Hadalkii Qoor-qoor maxaa loo fasiran karaa? – Benaadirtv.com
Ahmed Abdi Kaariye (Qoor Qoor) – Galmudug State President
Madaxweyne Qoor-qoor oo xalay ka hadlay Dhuusa Mareeb wuxuu sheegay in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ee ka maqan shirka ay ku han weyn yihiin iney ku soo biiraan kulanka ka socda Dhuusamareb.
Dr Max’ed Axmed Shekh Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda oo ka hadlay ayaa sheegay “inuusan u maleynaynayn in qolyaha Dhuusamareeb joogo ay rajo ka qabaan in haddii aysan shirka ka soo qeyb gelin hogaamiyeyaasha Punland iyo Jubaland ay wax miradhal ah ka soo baxaan shirka.”
Qoraalka sawirka,Kulan hore oo ay baarlamaanku yeesheen
“Madaxweyne Qoor-Qoor oo fidiyay gogosha shirka ayaa waxay ahayd inuu halkii ka sii wado dadaalkiisa balse khudbadda uu jeediyay waxay u muuqatay inuu la saftay madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka sidaa darteed laba saf ayay noqdeen oo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye waa uu ka baxay dhex-dhexaadnimadii.”
Previous Previous post: Warbixin: Maxaa ka jira in la fududeeyey weerarkii Elite?
Next Next post: Where did it all go wrong Mr President?